Wararka Suuqa Maanta: Chelsea iyo Bayern Munich oo eegaya Heshiis isdhaafsi oo uu ku jiro Christian Pulisic, Xaalada Andre Onana iyo Qodobo kale | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: Chelsea iyo Bayern Munich oo eegaya Heshiis isdhaafsi oo...
Wararka Suuqa Maanta: Chelsea iyo Bayern Munich oo eegaya Heshiis isdhaafsi oo uu ku jiro Christian Pulisic, Xaalada Andre Onana iyo Qodobo kale
Barcelona iyo Real Madrid ayaa ka mid noqon doona kooxaha xiiseynaya xiddiga Leicester Youri Tielemans haddii xiddiga qadka dhexe ee reer Belgium oo 24 jir ah la heli karo xagaaga soo aadan. (TheAthletic)
West Ham ayaa ka shaqeyneysa heshiis ay kula soo saxiixaneyso xiddiga qadka dhexe ee kooxda Juventus Weston McKennie, oo 23 jir ah, iyadoo wadahadalo ay durba bilowdeen. (DootballInsider)
Kooxda Arsenal ayaa loo gacan galiyay suuqa kala iibsiga iyada oo kooxda Ajax ay joojisay wadahadaladii heshiis kordhinta goolhayaha reer Cameroon ee Andre Onana oo 25 jir ahaa (Voetbal International)
Garabkii hore ee Bournemouth Arnaut Danjuma, oo 24 jir ah, ayaa Liverpool si dhow ula socotaa ka dib markii xiddiga reer Holland uu xilli ciyaareed fiican ku bilowday kooxda cusub ee Villarreal . (Voetbal International)
Liverpool ayaa daawanaysay xiddiga qadka dhexe ee kooxda Porto iyo xulka Colombia Luis Diaz oo 24 jir ah (Independent)
Chelsea iyo Liverpool ayaa xiiseynaya xiddiga garabka uga ciyaara Newcastle iyo France Allan Saint-Maximin, oo 24 jir ah (Express)
Borussia Dortmund ayaa ka fiirsaneysa inay la soo wareegto weeraryahanka reer France ee Manchester United Anthony Martial, oo 25 jir ah, haddii weeraryahanka Norway Erling Haaland, oo 21 jir ah, uu kooxda ka tago xagaaga. (Sport1)
Tottenham ayay u badan tahay inay sugto xagaaga soo socda, halkii ay ka ahaan lahayd Janaayo, ka hor inta aysan isku dayin inay mar kale iibiso Dele Alli, marka la eego inta uu hoos u dhacay qiimaha 25 jirka reer England. (FootballInsider)
Barcelona ayaa dalab ka heshay shirkad ku taal Dubai si ay u iibsato guud ahaan deynta kooxda oo ah 1.5bn euros (£ 1.2bn). (Mirror)
Barca ayaa Bayern Munich kula biirtay baacsiga xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Ajax ee Antony oo 21 jir ah (Sport)
Chelsea iyo Bayern Munich ayaan hadda ka fiirsan wax wada xaajood ah oo ku saabsan heshiis is dhaafsi ah oo u dhexeeya garabka USA Christian Pulisic, oo 23 jir ah, iyo 25 jirka garabka uga ciyaara Bayern Leroy Sane, inkastoo ay jiraan warar xan ah. (Fabrizio Romano)
Tababaraha Roma Jose Mourinho ayaa doonaya inuu kooxda keeno xiddiga qadka dhexe ee Tottenham iyo xulka France Tanguy Ndombele oo 24 jir ah. (FourFourTwo)
Kabtanka Tottenham ahna goolhayaha reer France Hugo Lloris, oo 34 jir ah, ayaa ku baaqay in loo samro macallin Nuno Espirito Santo oo la siiyo waqti uu wax ku qabto kooxda. (Standard)
Real Madrid ayaa xiiseyneysa daafaca dambeedka dhexe ee kooxda Inter Milan Alessandro Bastoni, inkastoo daafaca Talyaaniga oo 22 jir ah haatan lagu qiimeeyo 60m euros (£ 51.7m). (Mundo Deportivo)
Real ayaa sidoo kale xiiso u qabta saxiixa kabtanka Ivory Coast iyo daafacii hore ee Tottenham Serge Aurier oo 28 jir ahaa (Star)
Real Betis ayaa bilowday wada xaajood ku saabsan kordhinta qandaraaska weeraryahanka reer France ee Nabil Fekir, oo 28 jir ah (Marca)
Naadiga reer Holland ee HC’03 ayaa laga yaabaa in la ganaaxo ka dib markii uu ciyaaray weeraryahankii hore ee Real Madrid iyo AC Milan Klaas-Jan Huntelaar kaliya afar bilood ka dib markii uu 38-jirkan ciyaaray ciyaar xirfadeedkii ugu dambeysay ee Schalke . (De Telegraf)
Previous articlePep Guardiola oo ka hadlay Wacdarihii Lionel Messi iyo guuldarada ku dhacday Kooxdiisa
Next articleXildhibaan ka tirsan Somaliland oo dhagax lagu dhaawacay + sababta